top 25 Spotify Apps si kor Music Experience
Spotify ayaa dhab ahaan ka mid ah adeegyada geeyo music Ciyaar ka mid ah tobankii sano ee la soo dhaafay. Wuxuu ka kooban yahay ku dhawaad ​​20 milyan oo gabayo ay erayo weyn. Ka dib shan sano oo la bilaabay, xawaaladaha bixisaa feature in ay caleenta iyo ciyaaro ogaaaday ee Gurtida. Spotify sidoo kale ku faanayey doorashada wacdaraha balaadhan oo ah HTML5, Java, iyo barnaamijyadooda CSS Sahamin oo dhan music in madal leeyahay in ay bixiyaan.
Si loo sameeyo isticmaalka wanaagsan ee madal Spotify ka, waxaad u baahan tahay inaad isticmaasho adeega barnaamijyadooda qaar ka mid ah. Ka dib markii qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee Chine Spotify in ka dhigi doonaa waayo-aragnimo la Spotify runtii haboon in la xasuusnaado.
Moodagent deenishka-gurato ciyaara music sida ay niyadda. App abuuraa playlists afar saabsan: damqasho, ficiladooda nijaasta ah, xanaaq, iyo farxad. Waxa ay u ogolaataa dadka isticmaala si ay u dhigay, gooladaha dareenka in laga beddeli karaa oo dhan muddada playlist ah. Waxaad waa inuu dhex geliyaa karaa niyadda kala duwan oo aan ka ahayn mid ka mid ah bilowga ah in markii hore qarka u playlist ah.
# 2. Fargeeto beero
Tani waa qoraal Chicago ku salaysan ku salaysan tattoo Tony Montana ee filimka scarface. Fargeeto beero waxaa haboon burburay saddex tabs browsable: Best Qaasaali New, Dhammaan dib u eegidda, iyo Playlists. Album kasta muuqaalada xambaarsan rating ka mid toban.
Iyadoo gargaarka ee app this, dadka isticmaala ay ula socdaan kartaa lyrics of heesta in ay dhagaystaan. App ayaa si toos ah hoos ugu rogto doonaa oo geesi line hadda sida wadada la ciyaaray. Waxaad samayn kartaa qabsiga muuqaal cabbirka font iyo sidoo kale midabka asalka ah.
App Tani yeedhi dadka isticmaala si ay u dhagaystaan ​​heesaha oo ka on playlists ku sifayn ku salaysan ka. App wuxuu ka kooban yahay liis weyn qolalka ku sifayn iyo theme, users ayaa waxaa sidoo kale lagu dhiirigelinayaa in ay sameeyaan ay qol gaar ah oo ku sifayn.
# 5. Machine arrinka
App Tani jiidayo gabayadii dhawaan posted iyo sidoo kale playlists in ka badan 800 oo caan ah oo ka baxsan garaaca blogs music. Wuxuu ka kooban yahay saddex tabs: Featured Blogs, Blogs by Magaca, iyo Blogs by sifayn.
App Tani nabar Twitter u hashtag #nowplaying ah. Haddii aad jeceshahay in la-dadkii badnaa ee waxaa muhiim ah in aad ka dibna TweetVine ficnaan lahaa in aad u.
# 7. Fiyuus
Waxaa soo jeedinaya soundtracks marka fannaaniin sameeyo warka. Waxay isku daraa music Wararkii ugu dambeeyey la playlists qibradiisa idiin abuuray.
# 8. Hadda Taasi waa waxa aan ugu yeedho Music
App Arintan waxay u sahlaysaa in aad sii qulquli UK ee ugu sareeya 20-online. Waxaa ku jira qaar ka mid ah sidoo kale qaababka kale sida abuuridda playlist iyo sidoo kale qalab iyo farcanka.
# 9. Waxaan la eryay
App Tani waa waayo, kuwii ku caashaqi jiray ugu adventurous music. Liiska shaxda soo baxaya waa sababta ugu weyn si loo soo dajiyo adeeggan. App waxay ku talinaysaa playlists ku salaysan waxa ay dadka kale ee ka mid ah app waxaa lagu dhagaysto.
Ayaa ku dheggan indie British siiyaan ilaa ugu fiican ka Blightly iyo wixii ka dambeeya in. Waxaad si fudud muunad karaan dib-buugga in badan oo siyaabo.
# 11. Aqoonso nooca
Oo waxaa ka buuxa music classic. Waa doorasho wanaagsan ee bilowga ah buuxda. Waxaa ku jira wax badan in ay adagtahay in la ogaado meesha aad u bilowdo.
# 12. Dhaxalka ayaa
Waxaa badan sida app KALA SAAR loogu helo music hore in aad ku seegay. Markan ku wareegsan, waa dhagaxa classic iyo pop. Fanaaniinta saameynta ciyaari songs ee playlists ah.
App Tani ururiya playlists curated ah, albums dib loo eegaa in majaladda ah "Rolling Stone" iyo brand Gurtida cusub interface ah ku tilmaamay. Waxaad macno ahaan u helaan dhadhan ee magazine oo dhan.
# 14. Hot ama ma
App Tani qoreysa sort of ciyaar in kuu ogolaanayaa inaad go'aan ka gaarto in Gurtida random sabeyn doontaada ama waxa quustay. Marka aad sameeyey go'aankaaga, app ka mid ah saddex qaybood sheegi doonaa dhadhan xisbiga, ayaa dhagaxayga weyn, iyo magaalooyinka.
# 15- Digster
App Tani waxaa ay diyaariyeen Music Universal, oo halkan xoogga saarayaan fanaaniinta ay. Waxaa ku jira buugga ee playlists abuuray munaasabadaha gaarka ah.
Waxaad magacaabi ah ku sifayn, brand, ama mawduuca, ka dibna ka fikir ah 10. sare Sidaa awgeed, waxa aad awoodi kartaa in la abuuro playlists kuu gaar ah, dhirtuba ku playlists dadka kale, oo iyaga u ciyaaro. App abuuraa 10 ugu sareeya oo dhan 10s sare abuuray app ku salaysan caan ah.
Waxaa xitaa ka hor inta Spotify jirin sida adeeg loogu talogalay hoorto heeso iyo ururinta playlists ah. Hadda, waa shabakad bulsho kasta oo muusiko ah. Bareesada in app ee Last.fm soo galeen Spotify, oo waxaad ka heli doontaa dhadhan labada kooxda ee music.
Waxaa si toos ah u abuuraa playlists ku salaysan fanaaniinta talooyin aad, aad hannaankii eg on Spotify, ama xataa doorashada ee saaxiibadaa. Waxaa xitaa dhici karta in la abuuro playlist ku salaysan liiska dadka ka diiwaan dhacdo.
App Tani waxay aqoonsan tahay guutooyinkiisa oo aad jeceshahay aad u dhow, kuu oggolaadaan in aad iyaga ku dhegaysato nool. Waxa uu baaritaanku aad playlist si aad u hesho fikrad ku saabsan cadcad oo kuu ogolaanayaa inaad ogaato haddii fanaaniinta aad ugu jeceshahay waa kuu dhow.
Waxaa ku jira qalab loogu abuuro playlist cusub, codeynta ku playlist ka mid ah asxaabta, caleenta Gurtida ah ee la bixiyo. Wuxuu xambaarsan database badan ee music.
# 21. The Guardian-
Wuxuu ku siinayaa qoraal dhameystiran oo ka mid ah dib-music yihiin in aad maqalka. Waxaa kale oo aad u ogolaanaya helaan si degdeg ah u playlists album ee. Waxaad fursad u haysataa inaad la wadaagto kuwan raadkaygay ama iyaga oo intaa ku daray in ay aad galeeysid.
# 22. Blue Fiiro
Waa app cajiib leh dunida Jazz ah, oo ka kooban xogta music ka 70 sano ee lasoo dhaafay.
# 23. Soobixi
Waxaa raad muuqaalaynta xogta si aad u hesho fanaaniinta cusub oo aad jeceshahay. Waxa uu baaritaanku nidaam music aad muddo dheer si aad u ogaato fanaaniinta aad ugu jeceshahay.
Raadi yihiin ee adiga naftaada ku salaysan music dhadhan aad. Xataa waxaad shaandhayso laga yaabaa in natiijada da'da, iyo goobta.
Waxaa isticmaala siinayaa helaan si ay u sii daayo cusub, taariikhaha safar, iyo taariikhaha safar ee fanaaniinta ah Matador. Waxaa ku jira taariikhda falgal calaamadda waxaa ka socda dib u sii daayo xogta ay sanadkii 1992.
> Resource > Apps > Top 25 Spotify Apps in Download Now